Chris Polczinski သည် Lectrosonics နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ချမ်း the ခြင်း၏အသံများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Chris Polczinski သည် Lectrosonics နှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာများနှင့်ချမ်းတုန်မှုအသံများကိုသရုပ်ဆောင်သည်
Los Angeles မြို့, CA (၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်) - ထုတ်လုပ်ခြင်းအသံရောနှောခြင်း Chris Polczinski သည် R လိ Roth ထုတ်လုပ်သည့်အပါအဝင်သူ၏နာမည်ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကျယ်ပြန့်သောпалတန်းများနှင့်သူ့နာမည်ကိုမှတ်မိသည်။ သရဲခြောက်တဲ့, ပိုကောင်းသော Start ကိုပြေး, Self- ကာကွယ်ရေး၏အနုပညာ, အဆိုပါ သူစိမ်းများ - ညအချိန်တွင်သားကောင်နှင့်မကြာသေးမီက The Big Uglyတိုတောင်းသော Ron Perlman သရုပ်ဆောင်။ သူ၏အသံလှည်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သည် Lectrosonics ဒစ်ဂျစ်တယ် Hybrid ကြိုးမဲ့ဂီယာ။ ခါးပတ် - pack ကို transmitter ကိုပါဝင်သည် SMWB wideband, Ultra- ကျစ်လစ်သိပ်သည်း SSM, စက်မှုလုပ်ငန်း - စံ SMV နှင့် SMQVနှင့် UHF- တီးဝိုင်း LMbတစ်ခုကဖြည့်စွက် HMa စန်း mics နှင့်အတူအသုံးပြုရန် plug-on ကို transmitter ကို။ Receiver များတွင်ကျယ်ပြန့်သောအနိမ့်ဗားရှင်းပါဝင်သည် Venue modular စနစ်, SRb နှင့် SRc dual- ရုပ်သံလိုင်း slot က - mount ယူနစ်အဖြစ်အများအပြား UCR411a သွားတွေ။ Polczinski သည် Lectrosonics ၏အလုံးစုံသောဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်လည်းခုန်ကူးခဲ့သည် D2 သူကိုအသုံးပြုသည့်အနေဖြင့်စနစ် DSQD လေးချန်နယ်လက်ခံနှင့် DBu ခါးပတ် - pack ကို transmitter ။
Polczinski က“ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အသံနဲ့ဘွဲ့ရပြီးနောက် Foley အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့အလားအလာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ “ ဒါပေမယ့်ငါခြေထောက်တွေကိုဆန့်ထုတ်ချင်တယ်၊ စတူဒီယိုထဲတစ်နေ့ ၁၂ နာရီမဝင်ချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ခန့်ကလွှဲပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ငါအသံထွက်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ အသစ်ဖြစ်လာသောကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများလိုအပ်သည်ဟုခံစားမိသည် - ၎င်းသည် Lectrosonics နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များမှပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အသံဖုန်းများအတွက်။ ငါ UCR100 အသံဖမ်းစက်နှင့် LM ထုတ်လွှင့်စက်များဖြစ်သောငါ့ပိုက်ဆံအိတ်ခွင့်ပြုသမျှကို ၀ ယ်ရန် Location Sound သို့သွားခဲ့သည်။ ငါ UCR411a ရတဲ့အခါ, ငါနောက်ဆုံးတကယ့်လိုလားသူနဲ့တူခံစားရတယ်။ အသုံးပြုသူ interface လွယ်ကူပြီးအကွာအဝေးရူးပဲ! နောက်ပိုင်းမှာငါဟာတူးစင်ထဲမှာအကြီးမားဆုံးအလုပ်အများဆုံးလုပ်နေတဲ့ SMVs အချို့နဲ့အတူဂိမ်းကိုတိုးမြှင့်လိုက်တယ်။ ”
ပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုနှင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်အဝတ်အစားပါသောအညွန့်များတွင် SSM ၏သေးငယ်သောအရွယ်အစားသည်အဆင်ပြေရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ "ဒီသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်း နှင့် ဘရော့ဘန်းသည်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုဖြစ်သည်” ဟု Polczinski ကမှတ်ချက်ချသည်။
ကင်တပ်ကီရှိရုပ်ရှင်တစ်ကားတွင်မင်းသမီးတစ် ဦး သည်ဘာမျှဘေးကင်းစွာဝတ်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြင့်အော်ပရေတာက SSM ကိုသိမ်းပြီးသူမကိုရေချိုးခန်းထဲသို့ပို့လိုက်သည်။ သူမထွက်လာပြီးယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်လူတိုင်းက 'ခင်ဗျားကသူမကိုဘယ်လိုဝတ်ဆင်ခဲ့တာလဲ ထို'' သူမသည် 'မစိုးရိမ်ပါနဲ့' ဟုရိုးရိုးလေးပြန်ဖြေသည်။ ဒါ့အပြင် သူစိမ်း မင်းကမင်းသမီး Bailee Madison မှာပထမဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အတွက် Bailee လို့ခေါ်တဲ့နည်းစနစ်ကိုငါတို့သုံးခဲ့တယ်။ သူကအလယ်အလတ်တန်းစားထိပ်တန်း ၀ တ်စုံတစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်မင်းက ၀ ါယာကြိုးမပြနိုင်ဘူး။ သင်က transmitter ကိုကလေးရဲ့ခြေအိတ်ထဲထည့်ပြီးသူမရဲ့လက်မောင်းအောက်မှာသူမရဲ့ဘရာစီယာဘေးဘက်ကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်လုံးဝမမြင်ရသောကြောင့်သင် SSM သို့မဟုတ် SMV ထက် ပို၍ ကြီးသောအရာဖြင့်၎င်းကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည်လူမှုရေးအကွာအဝေးနှင့်လည်းရင်းနှီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းရည်ကိုမထိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် transmitter ကို LectroRM အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သာ beep လုပ်ပြီး ၄ စက္ကန့်မပြည့်မီတွင်ပြုလုပ်သည်။
သူကဆက်ပြောသည် -“ Lectro သည်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အလူမီနီယံအဖုံးများကိုအသုံးပြုသည်။ transmitter များ ၀ င်သောအခါကြာရှည်ခံမှုသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော နေရာများ။ ၎င်းတို့သည်ချွေးထွက်ပြီးချွေးထွက်နေသည်။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်တွင်အပူလွန်ကဲသည်။ အချိန်တိုင်းမှာသူတို့ဟာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Lectrosonics ၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျင်မြန်စွာကိုင်တွယ်ခြင်းသည် Polczinski ၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သူကရှင်းပြသည်မှာ“ ကျွန်ုပ်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်စက်ရုံရှိမိုက်ခရိုဖုန်းအမြောက်အများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အတွက် Spectrum ရရှိနိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ ဥပမာ၊ The Big Uglyသေနတ်ပစ်ပေါက်ကွဲမှုများ၊ ပေါက်ကွဲသံကြီးများနှင့် squibs များနှင့်အတူရှိစဉ်နောက်ပြန်ခြေရာခံစောင့်ကြည့်နေသော Steadicam ပစ်ခတ်မှုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်လူ (၇) ဦး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ငါလူတိုင်းကို miked လုပ်ထားတယ်၊ HMa plug-on ပါတဲ့ကြိုးမဲ့စန်းတစ်ခု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသံအတွက်ဝေးကွာသော cardioid နှင့်အချို့သောတက်ကြွသောမိုက်ကရိုဖုန်းများကျွန်ုပ်ရနိုင်သမျှနီးကပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုးမဲ့ချန်နယ်များစွာဖြစ်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းမှုအဆင့်ဆင့်သို့အသံလွှင့်စက်များကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာပို့ဌာနကကျွန်တော်ပေးတဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်ပြီး Lectrosonics ထုတ်လွှင့်စက်နဲ့ LectroRM အဝေးထိန်းအက်ပလီကေးရှင်းမပါဘဲကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ”
Lectrosonics ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သော D ကိုစမ်းသပ်ရန် Polczinski ကိုအစဉ်အမြဲတင်းကျပ်သောရောင်စဉ်များရရှိခဲ့သည်2 (D-Squared) စနစ်။ ၎င်း၏ထုတ်လွှင့်သူများသည် Digital Hybrid Wireless ထက် ကျော်လွန်၍ နောက်အဆင့်ကိုလုပ်ပြီး 8PSK modulation မှတဆင့် encoded audio ကို digital format ဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။ (ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် Digital Hybrid ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်စက်များနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်နေသည်။ )“ ငါ LA ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာကြိမ်နှုန်းတွေအတူတကွစုစည်းမိလာတယ်” ဟု Polczinski ကမှတ်ချက်ချသည်။ ၄၇၀ ကနေ ၆၀၈ မဂ္ဂါဇီမှထုတ်လွှင့်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ကြိုးမဲ့လိုင်းများကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ bandwidth တစ်ခုနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့အတွက်ငါ DSQD ကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ဒီဟာကအပြစ်ကင်းစင်ပါတယ်။
DBQ transmitter မ်ားနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသော DSQD သည် Polczinski ၏အကွာအဝေးနှင့် Sonic စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်များထက်များစွာသာလွန်ခဲ့သည်။ "ငါမကြာသေးမီက DBu DSQD သို့သွားနှင့်အတူအကွာအဝေးစမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေ" ဟုသူကဆိုသည်။ “ ဒါဟာကျွန်တော့်ဇနီးတာရှာရဲ့ရှေ့အိတ်ကပ်ထဲမှာဖြစ်ပြီး၊ သူမပေ ၁၀၀ အကွာမှာကားဂိုဒေါင်နဲ့အတူ DSQD ရှိ RF မီတာ ၁၀၀ ရာနှုန်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါအသုံးပြုခဲ့တဲ့အခြားကြိုးမဲ့ setup တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ RF မီတာအဝါရောင်မကျဆုံးခင်သူမသည်ရပ်ကွက်တစ်ဝက်တွင်ရှိနေသည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းဆောင်ရည်သည်အရေးကြီးသော်လည်း Polczinski သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်ရှိလူများကိုထပ်တူဖော်ပြသည်။ Lectro ၏ဖောက်သည်အထောက်အပံ့သည်အရေးကြီးသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသူကချီးကျူးသည်။ “ Karl (Winkler၊ VP အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး) သို့မဟုတ် Gordon [ကုမ္ပဏီဥက္ကpresident္ဌ] နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါတိုင်းသူတို့သည်အသေးစိတ်နှင့်ကြင်နာစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ ငါလိုလားသောအသံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်စေ, အခြားမည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ထင်ကြပါဘူး။ ငါကသူတို့ရဲ့အစိုင်အခဲထုတ်ကုန်ကိုပထမ ဦး ဆုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူတွေကိုချစ်ကြတယ်။ ဒါကငါလုံးဝရောင်းဖို့လိုအပ်အားလုံးပါပဲ။
၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရုပ်ရှင်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပြဇာတ်ရုံဆိုင်ရာနည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်လေးစားခံရသည့် Lectrosonics ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များနှင့်အသံပြုပြင်ခြင်းထုတ်ကုန်များသည်ကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေး၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ရင်းနှီးသောအသံအင်ဂျင်နီယာများမှနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အသုံးပြုသည်။ Lectrosonics သည်ဒစ်ဂျစ်တယ် Hybrid ကြိုးမဲ့နည်းပညာအတွက်အကယ်ဒမီသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီးနယူးမက္ကဆီကိုရီယိုရာချိုတွင်အခြေစိုက်သောအမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှကုမ္ပဏီသို့လာရောက်ပါ www.lectrosonics.com.
ယခင်: စတီဖင်အာနိုးဂီတသည် Wins Four နှင့်အတူ Broadcast Production Awards တွင်ပြောင်မြောက်သည်
နောက်တစ်ခု: CineGear ON AIR ™သည် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်တွင် ASC ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များနှင့် ၂၀၂၀ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုတင်ဆက်သည်